I-VialTweeter - Sonication Ejulile Yemibhalo Emincane
I-Sonication iyindlela ephumelela kakhulu yokuxuba, i-homogenizing, i-emulsifying, ukuhlakazeka, ukuhlakazeka, kanye ne-degassing ye-liquid ngokusebenzisa i-cavitation ye-ultrasonic. I-VialTweeter isebenzisa lobu buchwepheshe ukumboza, njengezimboni ze-autosampler, izigcobo zokugcina kanye nezigqoko ezilula ngaphandle kwesidingo sokuvula i-cap noma noma yikuphi ukugeza kwamanzi.
Ukukhiqizwa kwalesi simodeli seVialTweeter kunqatshiwe futhi kufakwa imodeli yedijithali UP200St ngeVialTweeter. Sicela uvakashele ikhasi le UP200St ngeVialTweeter ngolwazi lwamanje kakhulu.
Vele, sisasabalalisa ama-sonotrodes, izesekeli nezinsizakalo zawo womabili amamodeli!
I I-VialTweeter iyindlela ephumelelayo ekuhlinzekeni kwezinguquko emanzini okuhlanza ama-ultrasonic noma amathangi, lapho amanzi azungezile izikhumba athatha iningi lamandla – ngenkathi amandla asebenzayo ku-1.5ml vial ingaphansi kwe-0.01 watt. Ngezinqubo ze-sonication, lokhu akunamandla nhlobo.
I I-VialTweeter ihambisa ama-watts angu-10 kuya kwezilinganiso eziyisithupha eziphezulu endaweni yayo ephakeme kakhulu kuze kufike kuma-watts angu-5 kuya kwezibini ezimbili ezibekwe endaweni yayo ephansi kakhulu. Lawa mazinga emandla avumela izinqubo zokuxhumana ngezingane eziyinkimbinkimbi (bheka uhlu ekupheleni kwaleli khasi) ngesikhathi esifushane, kufana nokukhuliswa ngokuqondile kwe-homogenizer.
I I-VialTweeter angakwazi ukunikeza ithubhu yokuhlola, ibhodlela noma i-beaker yevolumu engama-500ml ehlanganisiwe ekupheleni kwayo, futhi. Amandla angashintshwa ngokusebenzisa ukulungiswa kwe-amplitude ku-panel yangaphambili ye-generator. Uma isethwe, ubukhulu buzogcinwa ngenani elihlelekile futhi lizosatshalaliswa ngokulinganayo ngaphesheya kwezingu-6 zokuphakama okuphezulu kanye namachibi amabili aphansi, ngokulandelana. Lokhu kukunika imiphumela ye-sonication ye-sonication.
I I-VialTweeter inikwe amandla yiprosesa ye-ultrasonic UIS250v (250 watts, 24kHz). Leyunithi ehlanganisiwe futhi enokwethenjelwa kulula ukusetha futhi isebenze. Njengoba i-generator ye-ultrasonic ihanjiswe kumvamisa we-sonotrode ngokuzenzekelayo, ayikho imvamisa ye-frequency tuning edingekayo. Ukuze kube nokudluliswa kahle kwezingxubevange ze-ultrasonic ezikhungweni zomuntu ngamunye, izimbiza ziphoqwa ngobumnene zibe emigodini ye-VialTweeter. Imbobo ngayinye ye-VialTweeter yenzelwe ukubamba izigqoko zamasayizi ajwayelekile, imikhiqizo nemiklamo, njenge
ama-tubes wokuhlola ama-0.5ml, 1.0ml, 1.5ml noma 2.0ml ivolumu, isib. 12x32mm noma 15x45mm
izikhumba ezenziwe ngu Eppendorf, Ilanga-SRI, Greenwood noma ehambisanayo
ihlanganisa nge-snap phezulu, i-crimp top noma i-screw end finish
ivaliwe nge / ngaphandle kokufaka ivolumu okulinganiselwe
izikhumba nge / ngaphandle kokuvalwa
izigqoko ezisezingeni eliphansi, izigqoko ezingaphansi komhlaba, noma ama-V-bottom
izimbiza ezincane ze-microsampling, ama-head space vials, kanye nezitsha zokugcina zesitoreji
izikhumba ezenziwe nge-polypropylene (PP), i-polyethylene (PE), i-polymethylpentene (TPX), i-polystyrene noma i-PTFE noma enye enye iplastiki
Ekupheleni kwe I-VialTweeter, isitsha esisodwa singathintwa nge-sonication. Ungasebenzisa imikhumbi, njengokuthi
amabhodlela, ama-tubes wokuhlola noma ama-beakers
izitsha ezifika ku-500ml ivolumu
imikhumbi ye-10mm ububanzi obuncane
imikhumbi eyenziwe ngeglasi, i-polypropylene, i-polystyrene noma yimuphi omunye amapulasitiki
I I-VialTweeter idlidliza ngodonga lwe-vial / umkhumbi. Ngakho-ke, i-vial ingahlala ivaliwe. Ukuhlukumeza ngokuqondile nge-ultrasonic probe / sonotrode (isb I-LS24d5 ye-UIS250v) okungena emanzini, lokhu kuqeda ukungcoliswa kwamapulangwe. Iyanciphisa isikhathi esidingekayo nge-vial / isitsha. I-VialTweeter ingahlanzwa futhi ixiliswe kalula nge-disinfected kalula.
I I-VialTweeter i-autoclavable ngenkathi i-transducer ye-UIS250v yenziwe ngensimbi engagqwali (IP65, NEMA4). I-generator ixhunywe ku-transducer ngekhebula lokuxhuma le-4m.
I-UIS250v I-VialTweeter ingaqhutshwa ngokuqhubekayo. Ukusebenza komjikelezo wokujikeleza kungenziwa kukhethwe ngaphambili kwepaneli ye-generator ultrasonic. I-PC-interface etholakalayo ngokuzikhethela ne-software ingarekhoda amandla we-ultrasonic esiphezulu kanye namandla okufaka netheji elihlangene kunoma yikuphi i-Windows®-PC futhi ivumela ukulawula okude kuyo yonke imingcele ebalulekile, njenge-sonication time kanye ne-amplitude.
Ngaphandle kwalokho, i-UIS250v ingasetshenziselwa u-sonication kakhulu we-vial eyodwa. I i-sonotrode VT24d10 iklanyelwe ukuletha kufika ku-watts angu-15 ku-vial eyodwa. Lokhu kwenza izinhlelo zokusebenza eziyinkimbinkimbi kakhulu. I-Sonotrodes ye-vial diameter ehlukahlukene iyatholakala.
Ukuze i-sonication eqondile yoketshezi i-UIS250v ingahlonywa nge-sonotrodes ukuze igcwiliswe ngamanzi. Ngaleyo ndlela, i-UIS250v ingasetshenziswa njenge-homogenizer egcinwe ngesandla noma ekhonjiwe ngesandla.
Ukushintshaniswa phakathi kwe I-VialTweeter futhi i-sonotrodes ithatha cishe. 5min.
I I-VialTweeter kanye ne-sonotrodes ngayinye ingasetshenziswa ngokuhambisana ne-UIS250v yezicelo eziningi, njenge:
Ukuhlakazeka nokuqedwa nokwenza ukumiswa
ukuhlakazeka kanye nokuphazanyiswa kwamaseli, isb for protein extraction, noma ukukhishwa kwe-enzyme
i-deagglomeration kanye nokunciphisa usayizi wezinhlayiya isib isib. ukuthola izinhlayiyana ezihlakazekile
i-degassing, isb ngaphambi kokuhlaziywa
I-Ultrasonic Processor UIS250v
for operation ephathekayo noma ukusetshenziswa stand, Ama-watts angu-250, imvamisa ye-ultrasonic 24kHz, uhlelo lwe-frequency tuning system, i-amplitude eguqulwa kusuka ku-20 kuya ku-100%, ukuguqulwa kwe-pulse kusuka ku-0 kuya ku-100%, ukusebenza okumile okuvikelwe, ne-interface 9-pin ye-DSUB, ngamathuluzi aphakamisa, i-transducer IP40 ibanga, i-titanium phondo nentambo yesifazane i-M8x1 transducer (diam .xL) 50x350mm, isisindo: generator 1.2kg (LxWxH) 350x115x150mm, isisindo esingu 1.7kg
115 Volts, AC, isigaba esisodwa, 4A, 50-60Hz
I-230 Volts, AC, isigaba esisodwa, 2A, 50-60Hz
I-sonotrode ye-sonotrode ye-sonication okungaqondile ngokucacile kwezingu-8 (isib. i-Eppendorf), intambo yabesifazane i-M8x1, ene-thread bolt M8x1, izilinganiso ezikhethwayo (LxWxH) ezingu-210x40x50mm:
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 3mm, cishe. ubude be-100mm, intambo yamadoda engu-M8x1, ngamasampuli kusuka ku-5ml kuya ku-100ml
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 5mm, cishe. ubude be-100mm, intambo yamadoda engu-M8x1, ngamasampuli kusuka ku-10ml kuya ku-200ml
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 10mm, cishe. ubude be-100mm, intambo yamadoda engu-M8x1, ngamasampuli kusuka ku-20ml kuze kufike ku-400ml
i-sonotrode ye-sonication ye-1 ye-vial (isib. Eppendorf), ye-diameter yama-5 kuya ku-15mm (sicela ucacise ngezansi), eyenziwe nge-titanium, cishe. ubude be-100mm, intambo yabesifazane i-M8x1, ene-thread bolt M8x1, idinga ukuphoqa ukuma ukuma, isib. ububanzi be-ST1-Clamp (__mm), uphawu:
ububanzi obuyi-16mm, enziwe ngensimbi engenalutho, ubude bezingalo 300mm, ububanzi obuyi 150mm, ubude buka-600mm
cindezela ukubamba idayim. 0 kuya ku-63mm, eyenziwe nge-aluminium, ukusetshenziselwa ukuma kumile kufika ku-16.5mm, isib. ST1-16
noma ukuma okulula kwama-sampula ngaphansi kwe-probes ye-ultrasonic ukulawula ukujula ukujula, insimbi engagqwali, ukunyathelisa 100x100mm, ukuphakama okuguqukayo: 50 kuya 125mm
Rom 00:00 kuya 99:59 (min: sec)